भरतमोहन अधिकारी स्‍मृति फाउण्डेसनले कोशी अस्पताललाई दियो दुई सय थान पिपिए
6:11 pm 05-20
काठमाडौं, ६ जेष्ठ- भरतमोहन अधिकारी स्‍मृति फाउण्डेसनले विराटनगर स्थित कोशी अस्पातलाई दुई सय थान पिपिए उपलब्ध गराएको छ । फाउण्डेसनले विहिवार उक्त सहयोग हस्ताण्तरण गरेको हो । पिपिए हस्ताण्तरण कार्यक्रममा फाउण्डेसनका सचिव महेश आचार्य, सल्लाहकार जीवन घिमिरे, सदस्यद्वय महेश रेग्मी र सुवास आचार्य लगायतका शुभेच्छुकहरु र अस्पताल संचालक समिती अध्यक्ष, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दास लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
कोभिड १९ को नयाँ भेरियण्टका कारण संक्रमणको जोखिम बढदै गईरहेको स्थित माझ मोरङ् स्थित उक्त अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मुख्य आवश्यकताको पहिचान गरि उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको फाउण्डेसनकी संस्थापक लिमा अधिकारीले जानकारी गराईन् ।
भरतमोहन अधिकारी स्‍मृति फाउण्डेसन पूर्व उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री स्वर्गिय भरतमोहन अधिकारीको स्‍मृतिमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हो। स्वर्गिय नेता अधिकारीकी धर्मपत्नी सबिता अधिकारी फाउण्डेसनको अध्यक्ष छिन । फाउण्डेसनले जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउदै आएको छ भने अन्य सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न रहदै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई करूणा फाउण्डेसनले दियो ११० अक्सिजन कन्सनट्रेटर
9:27 pm 05-19
काठमाडौं- करुणा फाउन्डेशन नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ११० अक्सिजन कन्सनट्रेटर हस्तान्तरण गरेको छ । फाउन्डेशनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिसर पुगी स्वास्थ्य मन्त्री हृदयश त्रिपाठीलाई उक्त अक्सिजन कन्सनट्रेटरहरु हस्ताण्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोको उपस्थिती रहेको थियो ।
कोभिड– १९ बाट संक्रमित सिकिस्त बिरामीहरुका लागि अत्यावश्यक अक्सिजनको अभावले निकै कठिन अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा करूणा फाउण्डेसनले समाज कल्याण परिषदको समन्वयमा उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।
फाउण्डेसनले स्वास्थ्य सेवालाई महत्त्वपूर्ण आपूर्तिहरूले सहयोग पुर्‍याउँने हुँदा यस सहयोगले अक्सिजन प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेकाहरुका लागि राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्शबाट विभिन्न अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
4:46 pm 05-19
काठमाडौं, ५ जेठ- नेपाल चेम्वर अफ कमर्शले विभिन्न अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेको छ । चेम्वर अफ कमर्शले बुधबार उक्त सामाग्रीहरु वितरण गरेको हो । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताललाई उक्त सामाग्रीहरु हस्ताण्तरण गरे । हस्ताण्तरित उक्त सामाग्रीहरु अस्पतालको तर्फबाट डा. राजेश शाहले ग्रहण गरेका थिए । सो अवसरमा चेम्वरबाट बिगतमा पनि यस्तै सामाग्रीहरु प्राप्त भएको स्मरण गर्दै डा. शाहले चेम्वरलाइ धन्यबाद ज्ञापन गरेका थिए । यसैगरी चेम्वर अध्यक्ष मल्लले त्रिबि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षलाइ पनि स्वास्थ सम्वन्धी सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका छन् । त्रिबि शिक्षण अस्पताल आकस्मिक कक्षको तर्फबाट प्रा.डा.योगेन्द्रमान शाक्यले सामाग्री ग्रहण गरेमा थिए ।
त्यसै गरी चेम्वरका अध्यक्ष मल्लले राधास्वामी अक्सीजन थेरापी आइसोलेशन सेन्टर गौंगवुको लागि पनि स्वास्थ सम्वन्धी सामाग्रीहरु उक्त केन्द्रका तर्फबाट नेपाली सेनाका डा.क्याप्टेन मुक्तीनाथ साँखीलाई हस्तान्तरण गरे ।
आज हस्तान्तरण गरिएका सामाग्रीहरुमा पिपिइ सेट,सर्जिकल मास्क,सर्जिकल पन्जा, स्यानीटाइजर तथा सिटामोल रहेका छन ।
अध्यक्ष मल्लले चेम्वरले केही दिनमा सरकारी अस्पतालहरुलाइ अक्सिजन सिलिण्डर र कन्सन्टे«ट उपलब्ध गराइने तयारी गरेको बताए । उक्त अवसरमा चेम्वरका उपाध्यक्ष तथा नेपाल चेम्वर कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक दीपक कुमार मल्होत्रा, चेम्वरका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ तथा कार्य समिति सदस्य नवराज ढकालको उपस्थिति रहेको थियो ।
महामारीमा सहयोगको श्रृखंला चलाउदैं शंकर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङ
3:39 pm 05-19
कोभिड–१९को संक्रमण र यसको प्रभाव बढेसँगै नेपालका सफल दुई व्यापारिक समूह शंकर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङले संयुक्त प्रयासमा सहयोगको श्रृंखला सुरु गरेका छन्।दुबै समूहले संयुक्त रुपमा हालसम्म साढे तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण र प्राविधिक सहयोग देशभरका अस्पताल रअग्रपक्तिमा खटिएका ‘कोभिड वारियर’ हरुलाई हस्तानान्तरण गरिसकेका छन्।
शंकर र इन्फिनिटीले काठमाडौंको वीर र सशस्त्र प्रहरी बलअस्पताल, रुपन्देही र सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि आवश्यक सहयोगअग्रंपक्तिमा खटिएका दुई समाजिक संस्था मार्फत केही सामाग्री हस्तानान्तरण गरिसकेका छन् भने केही सामाग्री एक दुई दिनमै हस्तानान्तण गर्दैछन्।
शंकर समूहकाअध्यक्ष शंकरलालअग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङकाअध्यक्ष दीपकभट्टले महामारीमा सहयोगको यो श्रृंखला निरन्तर संचालन रहने बताए।उनीहरुले यस मानविय संकटमाअधुरा र उधारो बाचा भन्दाअहिलेको तत्कालआवश्यकताकोपूर्तीका लागिआफुहरु सक्रिय रहेकोबताए।
यो समूहकाअनुसार केही दिनमै धनगढी स्थित सेती प्रादेशीकअस्पतालमाअत्याधुनिक तथा बहुउपयोगीअक्सिजन प्लान्ट जडानको तयारी भइरहेकोछ।फ्रान्सबाट एयर लिफ्ट गर्न थालिएको नोभा एयर मेडिकल्स कम्पनीकोअक्सिजन प्लान्टले ४५शैंयाँमा ‘हाइफ्लो’ र दैनिक सात सय लिटर अक्सिजन उत्पादन हुनेछ।
दुबै कम्पनीले पहिलो चरणमा वीरअस्पतालको नयाँ भवनमा ५०शैयाँका साथै त्यसका लागि आवश्यक म्याट्रेस, तन्ना, सिरानी र त्यसको खोल लगायतका सामाग्री हस्तानान्तरण गरेको छ।यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवश्यक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका लागि १०० शैयाँका साथै त्यसका लागि आवश्यक सामाग्री हस्तानान्तरण गरिएको छ।
कम्पनीले काठमाडौंमा सामाजिक संस्था हामी नेपाल रसुदूरपश्चिम प्रदेशमा ह्युम्यानिटी फाउण्डेशन मार्फत सहयोग हस्तानान्तरण गर्दैआएको छ।
शंकर र इन्फिनिटीले चीनबाट मगाएका ५२० थान भल्भ्स र रेगुलेटर सहितकाअक्सिजन सिलिण्ड र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सशस्त्र प्रहरीअस्पताल बलम्बुलाई एक दुई दिनमै हस्तानान्तरण गर्दैछ।यस्तै रुपन्देहीमाअग्रपक्तिमा खटिएका ‘कोभिडवारियर’ का लागि५० हजार मास्क उपलब्ध गराइएको छ।
यो समूहले सुदूर पश्चिम प्रदेशका लागि ३२० थान र एपीएफ अस्पताल तथा कर्णाली प्रदेशमा एक–एक सय थान सिलिण्डर हस्तानान्तरण गर्दैछ।
यो समूहले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि डेढ लाख थान मास्क, २०० थान पीपीई सेट प्रदान गरिसकेको छ।यस अघि उक्त समूहले वीरअस्पतालमाअंग्रपक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र जोखिम मोलेर स्वयमसेवामा खटिएका हामीनेपालका स्वयमसेवकका लागि २५० वटा पीपीइसेट, २०० फेस सिल्ड र पाँच हजार मास्क दिएको छ।
‘अहिलेको महामारीमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै संयुक्त रूपमाआवश्यक सामग्री दिएका हौं,’ योसमूहले भनेको छ, ‘तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोग गरेर केही व्यक्ति बचाउन सकियो स्भन्ने उद्देश्यले यी सामग्री हस्तान्तरण गरेका हौं।’
काठमाडौं, जेठ ४ । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर छिट्टै आउन सक्ने भन्दै अहिले नै तयारी थाल्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । खोप नलगाएका व्यक्ति र बालबालिका तेस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा आरपी बिच्छाले छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वभरकै तथ्यांक हेर्दा अक्टोबर र नोभेम्बरमा कोभिडको तेस्रो लहर आउने निश्चितप्रायः रहेको बताए । ‘पहिलो लहरमा बूढापाका र दोस्रो लहरमा युवा बढी प्रभावित भएजस्तै तेस्रो लहरले बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।
कोभिडको पहिलो लहरमा संक्रमितमध्ये बालबालिका २ प्रतिशतभन्दा कम थिए । हालको दोस्रो लहरमा कुल संक्रमितमा बालबालिकाको हिस्सा करिब १० प्रतिशत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले समेत कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्ने र यसले बालबालिकालगायत खोप नलगाएकाहरू बढी जोखिममा पर्न सक्ने बताए ।
दोस्रो लहर कम भएर सामान्यतर्फ जान थालेपछि स्कुल खुल्ने भएकाले संक्रमणको समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रले संयम तोडेर दोस्रो लहर ल्याउन सघाए,’ डा अधिकारीले भने, ‘तेस्रो लहर चाँडै फैलिन्छ, अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थिति आउन सक्छ ।’ बालबालिकाका लागि खोपसमेत नभएकाले स्वास्थ्यमा जनशक्तिलगायत पूर्वाधार व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कोरोना भाइरसले सहजै रूप परिवर्तन गरिरहेकाले तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई तीव्र गतिमा समस्यामा पार्ने डा। बिच्छाको अनुमान छ । ‘हालसम्म बच्चाका लागि कुनै खोप छैन । अमेरिकामा फाइजरको खोप १२ देखि १५ वर्ष उमेरसम्मका लागि सुरु भयो तर त्यो तत्काल यहाँ आउने सम्भावना देखिँदैन । बच्चाको खोप छिट्टै नआउने भएकाले तस्रो लहरमा उनीहरू नै सर्वाधिक पीडित हुने आकलन हो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
देवघाटकी ६८ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु
6:13 pm 05-17
देवघाट, ३ जेठ । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका ५ गौरिटारकी ६८ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। उनको गएराती साँझ ७ बजेतिर मृत्यु भएको हो।
कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि हिजो बिहान मात्र उनको स्वाव संकलन गरी पिसिआर परीक्षणको लागि पठाईएको थियो तर रिपोर्ट नआउदै हिजै साँझ उनको मृत्यु भएको हो।
मृतक महिलाको आज बिहान ११ बजे कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रदिप बुढाथोकीले जानकारी दिए । शाखा प्रमुख बुढाथोकीका अनुसार मृतकको शव सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई देवघाट स्थित त्रिशुली नदी किनारमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
मृतक महिला ६ दिन अघि मात्र काठमाण्डौबाट देवघाट घर आएकी थिइन्। देवघाट गाउँपालिकामा पछिल्लो समय सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या १२ जना पुगेको छ भने १ जनाको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौं, २ जेठ- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीहरूले काठमाडौंका सरकारी अस्पतालहरूलाई पीपीई सेट, सर्जिकल मास्क, सर्जिकल पञ्जा, भीटामिन सी ट्याबलेट, सिटामोल ट्याबलेट लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरू वितरण गरेको हो ।
चेम्बरले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकट समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिका सभापति एवं कार्यसमितिका उपाध्यक्ष दीपक कुमार मलहोत्राको संयोजकत्वमा ‘नेपाल चेम्बर कोभिड–१९ केन्द्रीय व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
। उक्त अभियानअन्तर्गत बिरामीहरूको बढी चाप हुने सरकारी अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको चेम्बरले जनाएको छ ।
वीर अस्पतालका तर्फबाट प्रा. डा. रमिला श्रेष्ठ, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. पवनराज चालिसे, छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयबाट डा. मनोज श्रेष्ठले स्वास्थ्य सामग्रीहरू बुझे ।
यस्तै चेम्बरको टोलीले नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक आशा सिंह, कान्ति बाल अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. रामहरि चापागाईँ र परोपकार मातृ तथा बाल अस्पतालका डा. आशालक्ष्मी प्रजापतिले सामग्रीहरू बुझेका छन् ।
अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक अक्सिजन तथा सिलिन्डरको अभाव देखिएकाले यथासिघ्र सिलिन्डर तथा अक्सिजन कन्सेन्टेटर आयात गरी एक साताभित्र अस्पतालहरूमा वितरण गरिने नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष मल्लसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपककुमार मलहोत्रा, उपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यहरू नवराज ढकाल र सन्तोष पाण्डेको उपस्थिति थियो ।
आत्मवलले मान्छेलाई बाँच्न सिकाउँछ
08:40 am 05-15
अहिले हामीे कोरोना महामारीसँग लडिरहेका छौँ। यति बेला हामीलाई ठूलो सकस परिरहेको छ । रातमा निर्दा लाग्दैन । दिनमा छटपटि छुटछ । घरमा बसिरहँदा मनमा अनेक कुरा खेलिरहन्छन । आज देशका बिभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिरहेको छ । यो महामारी नियन्त्रणका लागि देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा निषेधाज्ञा जारी छ ।
सवैले सामाजिक दुरी पनि पालना गरिरहेका छौं । तर पनि अझै कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । महामारी नियन्त्रणको लागी अव सवैले आआफ्ना स्थानबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने आबश्यकता छ। यो महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको मात्र एकल प्रयासले सम्भव छैन । सरकारलाई सघाउन सवैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलौं ।
कोरोना संक्रमणले डर लाग्दो रुप लिदै आएको छ । सवैले धर्य गरौं, हतास मनस्थिती नवनाऔं । आत्मवललाई उच्च बनाऔं । आत्मवलले मान्छेलाई बाँच्न सिकाउँछ । मनमा अनाबश्यक कुरा खेलाएर नबसौं । यो फुर्सदका बेलामा बिभिन्न किसिमका आत्मवल बढाउने र उर्जा दिने खालका पुस्तक पढेर समय बिताउने काम गरौं ।
महामारी नियन्त्रण सरकारको वशमा छैन । आर्थिक रूपमा विश्वमै शक्तिशाली मानिएका देशहरूलाई समेत यो कोरोना भाईरसले अत्तायो । गत बर्ष कोरोना भाईरस एक देशबाट अर्को देशमा सल्किएर विश्वव्यापी बन्यो । पछिल्लो समयमा आएर इटालीमा पनि माहामारीले ठूलो रुप लियो । चीनले इटालीसम्म चिकित्सकसहित स्वास्थ्य सामग्री पठायो र ठूलो साथ दियो ।
महामारीमा त्यस देशका जनता एक भए । इटालीवासीले नियन्त्रणपछि केही समय आरामको श्वास फेरेका छन । सामूहिक अभियान र प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । अहिले नेपाल स्वास्थ्य संकटमा गुज्रिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत आफंै कोरोनाको दोस्रो लहरले थलिएको छ, चीन सहयोग दिन र महामारी नियन्त्रण ल्याउनमा व्यस्त छ ।
यहि बेलामा राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने खेलमा लागे । हाम्रो आफनै लापरवाहीले गर्दा महामारीको क्षति पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा बढी बेहोर्नु परेको छ । योे कुरा हामी सवैलाई अवगत नै छ । अव यो विषयमा चिन्तन मनन गर्ने समय घर्किएको छ, अब स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवैलाई चिन्ता छ । महामारी नियन्त्रणमा नआए सम्म सबैले सामाजिक दुरी कायम राख्नु पर्छ ।
यो नियन्त्रणका लागी हामी सवैले हातेमालो र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नु पर्ने आबश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा कर्मी, संचारकर्मी दिन, रात परिवार नभनी आफनो स्वास्थ्य समेत जोखिममा राखी संक्रमितको उपचार र सेवामा खटिरहेका छन । यो माहामारीका बेला संचारकर्मीहरु छिनछिनको समाचार संकलनमा खटिरहेका छन । स्थलगत रिपोटिङमा खटिएका संचारकर्मी पनि धेरै जोखिममा छन । अझै पनि संचारकर्मी संक्रमित छन ।
संक्रमित संचारकर्मीहरुले ज्यान समेत गुमाएका छन । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा कर्मीहरु पनि संक्रमित भएका छन । सरकारले उनीहरुका बारेमा बिशेष सोच्नु पर्छ । अहिले यो कोरोना संक्रमणवाट कोही अछुतो छैन । त्यसैले यो कोरोना संग कसैले खेलवाड नगरौं । शवलाई ब्यवस्थापन गर्ने काम सुरक्षाकर्मीले गरेका छन ।
अप्ठ्यारो बेलामा साथ र सहयोग गर्नु मानव धर्म पनि हो । आमनागरिकले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई मुख्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले मुख्य रुपमा नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु पर्छ ।
अहिले यो बाहेक अन्य कुरा सोच्ने बेला छैन । यो माहामारीका समयमा दलका प्रमुख नेताहरु मिलेर कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । त्यसैले अब सत्ता स्वार्थ र पार्टी स्वार्थको राजनीति छाडेर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रतिबद्धता सहित लाग्नु पर्छ ।
काठमाडौं । कोभिडको दोश्रो चरणको लहरले नेपालमा अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्वले ६ सय अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल पठाउने भएको छ । संघले ६ सय अक्सिजन सिलिण्डर यही हप्ताभित्र नेपाल पठाउने भएको हो । नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा ओमानबाट ४० लिटर क्षमताका ६ सय वटा सिलिण्डर नेपाल पठाउन प्रकृया अगाडि बढिसकेको यस अभियानका संयोजक तथा एनआरएन आइसीसी सचिव आरके शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
‘कोभिडको विषम परिस्थितिमा सिंगो मध्यपूर्वका नेपालीको अभियान, ६ सय अक्सिजन सिलिन्डर मार्फत दैनिक १२ सय नेपालीलाई जीवनदान’ भन्ने नाराका साथ एनआरएन मध्यपूर्वले अभियान थालेको सोमबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
‘अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेंड नपाएर छटपटाउदै छटपटाउदै ज्यान गुमाउनु परेको हृदयविदारक अवस्था छ भने अक्सिजनका सिलिंडरको अभावले गर्दा बचाउन सकिनेको पनि ज्यान गइरहेको छ, आजको यो स्थितीमा हामी मध्यपूर्वबासी नेपालीले एक हप्ताभित्र अक्सिजनका सिलिंडर नेपाल पठाउन अभियान सुरु गरेका छौ’ संयोजक शर्माले बताए ।
मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएन एनसीसी, संघसंस्था तथा सहयोगी हातहरुबाट रकम उठाएर पहिलो चरणमा नेपालमा अक्सिजन सिलिण्डर पठाउन लागिएको एनआरएन मध्यपूर्वका संयोजक प्रविन गुरुङले जानकारी दिए । ‘हामीले एनआरएन आइसीसीको कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यपूर्वबाट छुट्टै अभियान थालेका छौं, यो सहयोगले केही हदसम्म टेवा पुग्ने आशा राखेका छौं’ गुरुङले बताए ।
अहिले नेपालमा अक्सिजन उत्पादन भएता पनि सिलिण्डर अभाव हुँदा विरामीले अक्सिजन पाउन सकेका छैनन् । ओमानमा सिलिण्डर खरिदका लागि प्रकृया अगाडि बढिसकेको र नेपाली दूतावास ओमानले सहजीकरण गरिदिएको जानकारी एनआरएन प्रवक्ता तथा एनआरएन ओमानका संस्थापक अध्यक्ष डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
एनआरएनएले कोरोना महामारीमा विभिन्न सहयोग कार्यक्रम ल्याइरहँदा एनआरएन मध्यपूर्वले तत्काल सिलिण्डर पठाउने अभियान थाल्दा अन्य क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एनआरएन सल्लाहकार टिवी कार्की, मध्यपूर्व उपसंयोजकद्वय मनोज गोर्खाली, राजेन्द्र अर्याल, एनआरएन ओमानका अध्यक्ष बिकल झाले मध्यपूर्वमा रहेका आम नेपालीलाई नेपालमा अक्सिजन सिलिण्डर पठाउने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । कोरोना विरामीले अक्सिजन अभावबाट मृत्यु हुन नपरोस् भन्ने मध्यपूर्वको अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको जरुरी छ ।
हाल नेपालमा अक्सिजन उत्पादन भएता पनि सिलिण्डर अभाव हुँदा विरामीले अक्सिजन पाउन नसकेकाले ओमानमा सिलिण्डर खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको एनआरएनए ओमानका अध्यक्ष झाले बताए । यो कार्यक्रमका योजनाकार झाले सबै प्रक्रिया शुरु भएको र एक हप्तामा सिलिण्डर नेपाल पुर्याउने दाबी गरे झाले यो कार्यक्रम सफल पार्न नेपाली दूतावास ओमान र राजदुत सर्मिला पराजुली ढकालको ठुलो योगदान रहेको पनि उनले बताए । ओमानबाट उक्त सिलिण्डर नेपाल ल्याउनका लागि सरकारी प्रक्रियामा राजदुताबासले सहजीकरण गरिदिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरु केहि हुन सक्दैन
07:09 am 05-07
प्राणघातक जस्तो कोरोना भाईरस संग जोगिन आफनो घरभित्र बस्नु बाहेक अर्को कुनै बिकल्प देखिएन । लामो दिन सम्म एकै ठाउँमा बसिरहदा दिग्दार लाग्दो रहेछ । के गर्ने यो संग जोगिन पनि त पयो नि । धर्य साथ हामी सवैले निषेधाज्ञा पालना गरौँ ।
यो बाहेक अरु कुनै बिकल्प छैन । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर गम्भीर प्रकृतिको रुपमा देखा परेको छ । यो रोग संग हामी कसैले पनि खेलवाड नगरौं । सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरबाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको छ । सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा पालना गर्ने दायित्व र कर्तव्य हामी सवै नागरिकको हो ।
सरकारले कोरोना भाईरसलाई नियन्त्रमा ल्याउन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । आज देशमा दिनप्रति दिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । बिरामीको मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ । आज कोरोना महामारीको दोस्रो लहर निकै संकटपूर्ण देखिएको छ । यसको सामाना गरेर जानु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ ।
त्यसका लागी राष्टिय एकताको आबश्यकता छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु यति बेला सत्ता स्वार्थको राजनीतिलाई छाडेर कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा ल्याउन लाग्नु पर्ने देखिन्छ । तर दुरभाग्य नेताहरु सत्ता स्वार्थमा नै रुमल्लिरहेका छन । यो लाज लाग्दो कुरा हो । यति बेला सवै राजनीतिक दलहरु मिलेर कोरोना भाईरसको सामाना गरेर जाने बेला हो ।
पहिलेको भन्दा अहिले कोरोना भाइरस खतरनाक भएको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन । अब सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बिरामीको उपचारको गम्भीर तयारी र आवश्यक औषधि तथा उपचार कक्षको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । अहिले बिरामीको चाँप बढे संगै अस्पतालहरुमा बेडको अभाव हुदै गएको छ । अहिले हामी बिषम परिस्थिती बाट गुर्जिरहेका छौ । त्यसैले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र यसको पालना सबैले गर्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।
सबै जनताले सचेत भएर सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । अव सवैले आ आफनो स्वास्थ्यको आफै ख्याल गर्नु पर्ने जरुरी छ । कोरोना संक्रमण मलाई पनि हुन सक्छ र मसँगै रहेका सहकर्मीलाई पनि हुन सक्छ भन्ने कुरामा सदैव सवै सचेत भइराख्नु जरुरी छ । सबैले सबैलाई आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऔं भन्ने धारणाको बिकास गरौं ।
यो आधारभूत कुरालाई मनन गरेर व्यवहारमा प्रयोग गर्नु जरुरी भएको छ । सरकारले अहिले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट ननिस्किनु भनेर जारी गरेको अनुरोधमूलक निषेधाज्ञा सबैले इमान्दारीपूर्वक पालना गरौं । यो अहिलेको बाध्यात्मक आवश्यकता हो । यो कुनै रहर होइन । यसलाई कसैले पनि खेलवाडमा उडाउने काम नगरौं ।
स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरु केहि हुन सक्दैन । स्वास्थ्य रहे अरु रहन्छ । दोस्रो लहरको कोरोना महामारी अति संवेदनशील र डरलाग्दो रूपमा देखिएको छ । यो संग खेलचारी गर्नु हुदैन । बरु,समयमै यसकोे रोकथाम, उपचारका उपाय अवलम्बन गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने काम सवै नागरिकले गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकार पनि निकै सचेत र गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।
पछिल्लो चरणमा बाक्लो बस्ती भएका गाउँ, काठमाडौं सहर लगायत मुख्य सहर र छिमेकी देश भारतसँग सीमा जोडिएका सहर बढी प्रभावित छन् । तर, पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणबाट दूरदराजका गाउँसमेत बच्न सकेका छैनन् ।
यो अवस्था भयावह अवस्था नै हो । सबै मिलेर यसको सामाना गर्ने बाटोमा लागौं । सरकारको मात्र एकल प्रयासले यो माहामारी नियन्त्रमा ल्याउन सम्भव छैन । सवै नागरिक एक जुट भएर लागौं । अहिले यो पार्टी र उ पार्टी भनेर गाईजात्रा देखाउने बेला होइन ।
जनताले यो पटक्कै मन पराएका छैनन् । अहिले नेताहरुमा देखिएको जुन किसिमको सत्ता स्वार्थको झुण्ड छ , त्यो नेपाली जनतालाई मन परेको छैन । अहिले यो माहामारीका बेला राजनीति गर्ने होइन, माहामारी बिरुद्ध एक ढिक्का हुने बेला हो ।